Weerar khasaaro geystay oo ka dhacay Shabeellaha Dhexe - Wardeeq 24 TV Weerar khasaaro geystay oo ka dhacay Shabeellaha Dhexe Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Weerar khasaaro geystay oo ka dhacay Shabeellaha Dhexe
Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegay inay weerar ku qaadeen Guri ku yaal degmada Raaga-ceelle ee gobalka Shabeellaha dhexe, waxaana weerarkaas ka dhashay khasaaro nafeed iyo mid hantiyadeed.
Warar kasoo baxayay weerarkaas ayaa waxaa ay sheegayeen in Al-Shabaab ay Nolosha ku kaxeysteen Nin ahaa Nabadoonkii degmada oo lagu Magacaabo Axmed Jilcane, hayeeshee War kasoo baxay Al-Shabaab ayaa waxaa lagu sheegay inay dileen Ninkaas, isla markaana uu ahaa Sarkaal ka tirsan Dowladda Soomaaliya.
Warar lagu daabacay Baraha Internetka ee taageera Al-Shabaab ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in la gubay Laba Gaari oo NOHA ah oo uu lahaa Nabadoon Axmed Jilcane.
Mas’uuliyiinta Maamulka degmada Raaga-ceelle iyo Saraakiisha Ciidamada kama hadlin weerarkaas, waxaana dadka degmada qaarkood ay sheegeen inay cabsi soo wajahday.
Degmada Raaga-ceelle iyo degmooyin kale oo dhowr ah oo ka tirsan Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa dhowr jeer ka dhacay weeraro ay geysteen Xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo howlgallo ay fuliyeen Ciidamada Kumaandoosta DANAB.
Previous articleErgeyga ka socda Qatar oo Maanta kulamo la yeelanaya DFS iyo Mucaaradka
Next articleSoomaali lagu dilay Mareykanka & Booliska oo baaris wada